AppImageLauncher - Mfe Mwepụta ma jikọọ Ngwa n'ime Appimage | Site na Linux
AppImageLauncher: weghachite ma jikọta ngwa na ngwa
Ọchịchịrị | | Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ
Agofọdụ gara aga n'ụwa Gnu / Linux anyị nwere usoro ụwa niile ịwụnye ngwa ọ bụla n'agbanyeghị nkesa a na-ekwu maka ya na usoro a bụ site na ikpokọta ngwa ahụ site na koodu isi ya.
A ka ji usoro a, ọ na-adịkarị ọdụNa mgbakwunye na nke ahụ maka ndị ọrụ ọhụrụ na Linux na ọbụlagodi ndị ọrụ etiti, ọrụ nke a nwere ike ịdị ntakịrị mgbagwoju anya.
Ugbua ịbụ ntakịrị ihe akọwapụtara ọtụtụ nkesa na-ejikarị ụfọdụ njikwa ngwugwu nke ejiri kwado ha maka ntinye nke ngwa, kwuo ihe atụ Debian ma ọ bụ Ubuntu nwere ngwa dabara na deb ma ọ bụ Fedora na ngwugwu yum na rpm.
Nke anyị ji ahụta ngwa na ụdị ngwugwu kachasị ewu ewu ma ha na-echekwa anyị oge dị ukwuu na ntinye ebe ọ bụ na anyị achọghị ikpokọta ya na sistemụ anyị.
Ndi ọ bụghị ogologo oge ụdị ngwugwu ọhụrụ amalitela ịpụta ịwụnye ngwa, dịka ọmụmaatụ, Snap, Appimage ma ọ bụ Flatpak.
Ebe kachasị mma nke ụfọdụ n'ime ndị a bụ na ha na-agba ọsọ na gburugburu ebe dịpụrụ adịpụ na usoro ahụ, nke anyị agaghị enwe nsogbu nke imebi usoro ahụ ma ọ bụ imebi ya.
1 Banyere AppImageLauncher
1.1 Kedu ka AppImageLauncher si arụ ọrụ?
1.1.1 Gbaa otu ugboro ma ọ bụ jikota ma gbaa ọsọ.
1.1.2 Hichapụ ma ọ bụ melite ngwa ahụ.
2 Etu esi etinye AppImageLauncher na Linux?
N'oge a anyị ga-elekwasị anya na nchịkọta na usoro AppImage nke ọbụna ọtụtụ ndị ọrụ amaghị etu esi etinye ha na ọbụnadị etu esi etinye ha na sistemụ anyị.
Mgbe anyị na-ebudata ngwugwu AppImage iji wụnye ya anyị ga-enye ya nwụnye ikikere ma gbue iwu na-esote iji wụnye ya:
Kedu nke ga-akwado na anyị ga-etinye ngwa ahụ, na njedebe nke a, a jụrụ anyị ma anyị chọrọ ka etinye ngwa ahụ n'ime menu ngwa anyị ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmepụta ụzọ mkpirisi.
Ebee ka otutu ndi oru choro ikwu n’amaghi ama ma obu site na mmeghe. Iji mee ngwa ahụ emesịa anyị ga-eme ya site na faịlụ anyị budatara.
Ma Anyị nwekwara ngwa ọrụ nwere ike ịkwado nke a, a na-akpọ ngwá ọrụ a AppImage Launcher.
Ngwa ahụ na-enye gị ohere ịme faịlụ AppImage ọsọ ọsọ, na-enweghị ime ka ha rụọ ọrụ.
AppImageLauncher maka ugbu a Naanị ya nwere nkwado maka Ubuntu, Linux Mint, Debian, Netrunner ma tinyekwa nkwado na nso nso a maka OpenSUSE.
Mana njirimara ya kachasị adọrọ mmasị bụ itinye ngwa AppImages na sistemụ gị ngwa ngwa: AppImageLauncher nwere ike tinye ụzọ mkpirisi na ngwa AppImage na akpaghị aka na nchịkọta menu / ngwa nke gburugburu desktọọpụ gị (gụnyere akara ngosi ngwa na nkọwa kwesịrị ekwesị).
Kedu ka AppImageLauncher si arụ ọrụ?
Mgbe Anyị na-ebudata ngwa na ngwa, pịa ugboro abụọ na ya iji gbaa AppImageLauncher na nke a ga-ewetara anyị ọtụtụ nhọrọ.
Ndị mbụ a ga-enye gị mgbe ị ga-etinye ngwa ahụ maka oge mbụ bụ:
Gbaa otu ugboro ma ọ bụ jikota ma gbaa ọsọ.
Na ịpị njikọta ma gbaa ọsọ, a na-edegharị ngwa dị na AppImage na folda ~ /.bin / wee gbakwunye na menu, mgbe ahụ a malitere ngwa ahụ.
Nhọrọ ndị ọzọ ọ na - ewetara gị mgbe etinyere ngwa bụ:
Hichapụ ma ọ bụ melite ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ iwepu ngwa ahụ, ọ dịkwa ka mfe, ọ bụrụhaala na desktọọpụ gburugburu ebe ị na-eji kwekọrọ na omume desktọọpụ.
Mgbe imelite ị kwesịrị igosi gị nhọrọ mgbe ị na - agba ọsọ AppImageLauncher ọzọ na emelitere emelitere nke ngwa nke ị tinyegoro na sistemụ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, na Gnome Shell, pịa aka nri na akara ngosi ngwa ngwa na Ihe Nlekọta ma họrọ Wepụ Sistem:
Etu esi etinye AppImageLauncher na Linux?
Dika m kwuru banyere ndakọrịta nke AppImageLauncher, obu ezie na enwere ike iji ya na ihe ndi ozo, anyi aghaghi iburu n'uche na ndakọrịta ya dabere na gburugburu desktọọpụ ebe Gnome Shell ma ọ bụ Cinnamon kacha adabara.
Naanị ị ga-aga na njikọ ndị a y budata ngwugwu maka nkesa gị Linux.
N'ihe banyere Debian, Ubuntu na nkwekọrịta, iji wụnye ya naanị anyị ga-etinye onwe anyị na folda ebe ebudatara ngwugwu ahụ ma mee ya:
Maka Ubuntu 18.04 karịsịa anyị nwere ngwugwu:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » AppImageLauncher: weghachite ma jikọta ngwa na ngwa
Chee echiche dijo
Ọ na-enye mperi: njehie mgbe itinye òkè ọba akwụkwọ: libQt5DBus.so.5: ike imeghe Amalite Ijekọ ihe faịlụ: Ọ dịghị otú ahụ faịlụ ma ọ bụ ndekọ
Ha kwesịrị ịgwa gị ihe ndabere ya nwere ma ọ bụ ebe ha na-edebe ihe iji budata ya ka o wee mee ihe niile n'onwe ya, tinye nke nyere gị otu puku ọmụmụ.
Ọ gaghị ekwe omume onye ọ bụla ịgwa gị banyere ịdabere na ntụkwasị obi nke mmemme ọ bụla
Ihe egwuregwu dijo
Ha nwere ike igosi otu esi eme ya na linin antix, jiri icewm ma achọpụtara m ya ntakịrị mgbagwoju anya, biko.
Etu esi etinye Gammu Izipu ozi na Gammu - Nkebi 1
Fedora 28 Nzọụkwụ Nzọụkwụ Ntuziaka